China abakhiqizi be-stump planer nabaphakeli | Imishini ye-Dongheng
Izici ze-stump planer yethu
I-KINGER stump planer inezinhlobo ezi-2 ezingasusa impande yesihlahla engu-300mm noma 400mm ububanzi.
UKUDALWA KWE-BLADE OKUKHETHEKILE
I-KINGER stump planer ene-double helix blade desgin, insimbi eqinile yensimbi nenhloko ekhethekile yokusika impahla inokusebenza kahle ekususweni kwesiphunzi.
I-KINGER stump planer ingafakwa kunoma iyiphi i-KINGER earth auger drive unit ukwenza ukususwa kwezimpande kalula futhi ngokushesha.
I-KINGER Stump Planer iyisinamathiselo esisebenzayo sokuhlinzeka ngomsebenzi owengeziwe ngokungeza amandla okuguqula okunamathiselwe kwe-KINGER earth auger yakho ekususweni kwesiphunzi esinamandla.Ngokwengeza lesi sihleli sesiphunzi ebangeni lakho lokunamathiselwe, ungasusa ngokuphepha iziphunzi zomuthi ngaphandle kokudideka, umsindo kanye Ingozi.
Ngenhla ukucaciswa kwemininingwane yethu yesiphunzi sesithenjwa sakho kungabekwa kunoma iyiphi i-auger drive unit ukuze isebenze.
Langaphambilini Ukuhlukaniswa kwelogi
Olandelayo: Isixhumi sebhakede